Yemagariro Midhiya Mirayiridzo yeBhizinesi
Shingairira! Mitemo Yebhizinesi neSocial Media
Muvhuro, June 7, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Kwemwedzi wapfuura, ndanga ndichiverenga Shingairira: Iyo Yakazara Nongedzo yeMabhizimusi neMabhizinesi ekuvaka, Kukudziridza, uye Kuyera Kubudirira muNew Webhu.
Ichi hachisi chiedza kuverenga - a yose mutungamiri anogona kunge ari pasi! Iri ibhuku raunonyatsoda kugara pasi, kutarisisa uye kugaya peji rimwe chete panguva. Brian akazvikunda nebhuku iri - rakazara uye rinogona kuvhara zvese zvinhu zvekumaka, webhu uye midhiya yemagariro kusvika zvino.
Sezvo zvakanyatsotsanangurwa, zvinonetsa kunyora kamwe chete nezve iro bhuku rese. Nekuda kweizvozvo, ini ndoda kugovera kuunganidzwa kwaBrian kweiyo mitemo yekuita bhizinesi nevezvenhau kubva paChitsauko 17 (kusimbiswa neni):
Simbisa a inoenderana, inowoneka, uye inowedzeredzwa matauriro ezwi.
Wedzera kukosha kune kubatanidzwa kwega kwega - batsira pachimiro uye nhaka.
Remekedza avo vauri kushamwaridzana navo uye zvakare remekedza foramu iyo yaunotora chinhanho.
Iva nechokwadi chekuti iwe kudza kodzero uye kudzidzira uye kukurudzira kushandiswa kwakanaka kwezviri mukati zvirimo.
Chengetedza zvakavanzika uye muridzi ruzivo.
Iva pachena uye uve munhu (zvakanaka, tenda uye ubatsire).
Mirira izvo iwe inofanirwa kumiririra.
Ziva uye shanda mukati me mitsara yakatsanangurwa.
Ziva nguva yekupeta 'em uye usabatana troll kana kuwira mukati misungo yekukurukura.
Chengeta zvinhu kukurukura sezvazvinoshanda pakuratidzira nekusimbisa hunhu uye kukosha kwechiratidzo chako uye nechiratidzo chaunomiririra.
Gara pane meseji, pane poindi, uye panzira uine zvinangwa zvebasa rako uye zvaro kukanganisa bhizinesi rechokwadi repasirese iyo yaunopa.
Usarase marara iyo makwikwi - kwete zvakananga, chero zvodii.
Apologize pazvinenge zvichidikanwa.
Iva anozvidavirira yezviito zvako uye usape zvikonzero.
Ziva wauri kutaura naye uye zvavari kutsvaga.
Taura hukama, kumiririra, kubatana, uye zvinangwa.
Dzidzira kuzvidzora; zvimwe zvinhu hazvina kukodzera kugovana.
Aya maratidziro haangofukidze chete mitemo yekubatana online, ndinoshuva kuti dai yaive mitemo yekutonga yekudyidzana nevashandi kubva kune chero kambani. Brian anoenderera mberi nekukurudzira kune muverengi wese kuti aise pasi bhuku uye vagadzikise yavo gwara. Sezvo ndashanda kumakambani mashoma, ndayambira pamusoro pekuputsa mitemo yakaita seiyi. Imwe kambani yandinoziva inoda kutora mukana wese kukanda marara (zvavanotenda kuti) makwikwi… uye nguva dzese dzandinotenda vanozvinyadzisa.
Iri bhuku rine hupfumi hwemashoko uye rinofanirwa kuverengerwa kuverengerwa kukambani yega yega inodonha mune nyowani midhiya. Kunyangwe iwe usinga verengi bhuku kubva pabutiro kusvika kubutiro, marongero ebhuku, iro rakadzama rezita rezvinongedzo, uye yakanyorwa zvakanaka index inoita iro rakakodzera bhuku rereferenzi kune chero desktop yemutengesi.
Tags: ita zvakakombatora akakomba mavhidhiyoiphone appmdgmdgkushambadzainopindura nzvimboscott adams
BP Chakavanzika Ruzhinji Hukama Hwekuita
Jun 28, 2010 pa 12: 10 PM
Semubatsiri weIT ndinonyatsoziva kuti manejimendi eIT ari kunetsekana nekuti vezvenhau vane zvibereko kana kuti vanovhiringidza makambani nevashandi vavo. Software iri kuvandudzwa uye mutemo uye zvirambidzo zviri kutemerwa zuva nezuva nevatungamiriri veIT. Kuchengetedzwa kwemakambani emakambani kuri panjodzi asi mukana wehunyanzvi uchishandisa vezvenhau iguru karoti yakakwana yekukurukura mashandisiro aungaite svikiro iri kuenderera. Palo Alto network yakauya nemuchena, http://bit.ly/d2NZRp, iyo ichaongorora nyaya dzakatenderedza pasocial media munzvimbo yebasa. Izvo zvakakosha kuti usango nzwisisa chete izvozvi mabhenefiti ekuita bhizinesi mararamire emunhu, asi kutyisidzira kunopa kune yakakura kambani ROI uye kugadzirwa kana zvasvika kune server chengetedzo uye chengetedzo.